Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo arrin lama filaan ah ka dhawaajiyay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo arrin lama filaan ah ka dhawaajiyay (AKHRISO)
Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa sheegay in Soomaaliya aanay wax shaqo ah ku laheyn nidaamka federaalka ah, oo sida uu hadalka u dhigay ah nidaam la doonayo in lagu sii kala jar-jarto intii ka hartay jamhuuriyada Soomaaliya.
”Soomaaliya wax shaqo kuma laha nidaamka federaalka, Soomaalida waa dadka isku af ah, isku diin ah, isku dhaqan ah, ciddii keentay dalkaa federaal ah, iyadaa og waxa ay ula jeeday, laakiin wax Soomaali anfacaya ma’aha wax aan shaqo ku leenahay ma’aha” Sidaasi waxaa yiri Ugaaska Beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif.
Ugaaska Xasan ayaa dhinaca kale sheegay in reer Hiiraan ay soo dhaweynayaan cid kasta oo Soomaali ah oo ka shaqeeyneysa in isbadal dalkaan uu ka hir-galo, wuxuuna dhinaca kale tilmaamay inaysan suurta-gal ahayn in dadkoo dhan hal maalin wax kuwada gartaan.
“Dadku inay maalin wax wadda gartaan suurta-gal ma’aha, maxaa yeelay hadii ay dadku maalin wax wadda gartaan wax laga shaqeeyo ayaan jireeynin, shaqadana waa loo baahan yahay” Ayuu Ugaas Xassan.
Ugu dambeyntii, Ugaas Xasan Ugaas Khaliif ayaa uga mahad celiyay isbaheysiga isbadal sameynta safarkooda magaalada B/weyne, isaga oo sheegay in magaalada ay ku soo dhaweyn doonaan cid kasta oo Soomaali ah oo u damqaneeysa dalka, dadka iyo diinta intaba.